Tsy irery isika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Tsy irery izahay
Matahotra ny ho irery ny olona - ara-pihetseham-po sy ara-batana. Ny fanokanan-tena mitokana any am-ponja dia heverina ho iray amin'ireo sazy ratsy indrindra. Nilaza ny psikology fa ny tahotra ny ho irery dia mahatonga ny olona tsy hatoky tena, ahiahy ary kivy.
Fantatr’Andriamanitra Ray izany ka nanome toky imbetsaka ny olona fa tsy irery izy ireo. Nomba azy ireo Izy (Isaia 43,1-3), nanampy azy ireo izy (Isaia 41,10) ary tsy handao azy izy (5. Mosesy 31,6). Nazava ny hafatra: tsy irery isika.
Mba hanamafisana an’io hafatra io, dia naniraka an’i Jesosy Zanany ho etỳ an-tany Andriamanitra. Tsy vitan’ny hoe nitondra fanasitranana sy famonjena ho an’izao tontolo izao rava i Jesosy, fa anisan’ny antsika koa. Nahatakatra ny zavatra iainantsika Izy satria niara-nitoetra tamintsika Izy (Hebreo 4,15). Nazava ny hafatra: tsy irery isika.
Rehefa tonga ny fotoana voatendrin’Andriamanitra izay nahavitan’i Jesosy ny fanompoany teto an-tany teo amin’ny hazo fijaliana, dia tian’i Jesosy ho fantatry ny mpianany fa tsy ho irery izy ireo na dia handao azy ireo aza.4,15-21). Ny Fanahy Masina dia hamerina izao hafatra izao: Tsy irery isika.
Isika manaiky ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ao anatintsika rehefa nandray antsika ka tonga ampahany amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Nanome toky antsika Andriamanitra fa tsy tokony hatahotra ny ho irery isika. Raha mihalevona isika satria mandalo na fisarahana, dia tsy irery isika. Raha mahatsiaro ho manirery sy manirery isika satria namoy havan-tiana iray, dia tsy irery isika.
Raha tsapantsika fa manohitra anay ny rehetra noho ny tsaho sandoka, tsy irery isika. Raha mahatsiaro ho tsy misy lanjany isika satria tsy mahita asa, dia tsy irery isika. Raha mahatsiaro diso isika satria milaza ny hafa fa misy antony manosika antsika hanana fitondran-tena, dia tsy irery isika. Rehefa mahatsapa malemy sy tsy afa-manoatra isika satria marary, dia tsy irery. Raha mahatsiaro ho tsy mahomby isika satria efa nodimandry, dia tsy irery. Raha tsapantsika fa mavesatra ny vesatry an'izao tontolo izao dia tsy irery isika.
Ny zavatr'izao tontolo izao dia afaka mandresy antsika, fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia eo anilantsika mandrakariva. Tsy eo izy ireo mba hanala ny toe-javatra manahirana antsika, fa hanome toky antsika fa tsy irery isika na inona na inona lohasaha tsy maintsy lalovantsika. Izy ireo no mitarika, mitarika, mitondra, manatanjaka, mahatakatra, mampionona, mamporisika, manoro antsika ary miara-mandeha amintsika amin'ny dingana rehetra amin'ny diantsika. Tsy hanala ny tanany amintsika izy ireo ary tsy handao antsika. Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatintsika ary noho izany dia tsy mila mahatsiaro ho irery isika (1. Korintiana 6,19), satria: Tsy irery isika!